China SUPER WHITE PVC VINYL -10140 ụlọ ọrụ na ndị na-emepụta |Shawi
VINYL SUPER na-acha ọcha -10140
Koodu mpaghara:: AD-V021
Aha: Super White PVC Vinyl -10140
Ngwakọta: 100um PVC + 140g akwụkwọ ntọhapụ
Ngwa: Ụgbọ ala mkpuchi , Board , Glass Wall , ike siri ike mgbidi , akwụkwọ ozi
Shawei onwe nrapado vinyl mpịakọta nwere ike nke ọma ink absorption na agba penetration, na-ebi akwụkwọ mmetụta nwere ike na-ekwe nkwa nke ọma na okwu nke vivid agba okwu.Ọ bụ vinyl ọcha monomeric na-ejide onwe ya.Ihe nkiri PVC nwere nha anya, nkwụsi ike dị iche iche, ọ dị mma maka iji ya na ụdị nbipute inkjet dịgasị iche iche na-eji ink ihe mgbaze.A na-atụ aro ngwaahịa anyị maka ọtụtụ ngwa nkwado dị mkpụmkpụ na mkpụrụ ewepụghị.Aha ngwaahịa Printab...
Akwụkwọ mpịakọta vinyl nke Shawei nke onwe ya nwere ikike nke itinye ink dị mma na ntinye agba,
enwere ike ijide mmetụta mbipụta nke ọma n'ihe gbasara ngosipụta agba doro anya.
Ọ bụ vinyl ọcha monomeric na-ejide onwe ya.Ihe nkiri PVC na nha nha, nkwụsi ike dị iche iche,
Ọ dabara adaba maka iji ụdị inkjet dị obosara dịgasị iche iche na-eji ink ihe mgbaze.
A na-atụ aro ngwaahịa anyị maka ọtụtụ ngwa nkwado dị mkpụmkpụ na mkpụrụ ewepụghị.
Aha ngwaahịa Ihe mmado ụgbọ ala a na-ebi ebi ebi / PVC na-ebi akwụkwọ inkjetVinyl nrapado onwe
Ọkpụrụkpụ fim 100 micro
Arọ nke akwụkwọ mwepụta 140gsm
Obosara 0.914 / 1.07 / 1.27 / 1.37 / 1.52m
Ụdị Ink Mmiri dabere/ihe mgbaze/Eco-solvent
Ụdị gluu Gluocha ọcha/isi awọ/oji bụ nhọrọ
Emecha elu Glossy/Matte
ngwugwu Katọn mbupụ ọkọlọtọ
Okpomọkụ dabara adaba -15°C—+60°C
Ndụ n'èzí 1-3 afọ / 3-5 afọ
Ngwa Ihe ịchọ mma windo, akara ime & mpụta, mgbasa ozi mgbasa ozi, mgbasa ozi ụgbọ ala
MOQ 20 mpịakọta
Oge Mbuga ozi 20 ụbọchị ọrụ mgbe ịnata nkwụnye ego
Ikike inye 3000000sqm / kwa ọnwa
Uru anyị nke mpịakọta vinyl nrapado onwe ya:
1.Self nrapado vinyl ike ga-eji dị ka iko graphic, ụgbọ ala ahụ graphic.
Ọ dabara adaba maka iji ink nbipụta inkjet dị oke obosara dị iche iche.
2.Its magburu onwe visual mmetụta na anya mmiri na-eguzogide na-eme ka ọ a obosara ojiji.
3.Ma kenkowaputa na matte elu dị.
4.Easy ịcha na ngwa ngwa na ụdị dị iche iche nke mkpụrụ.
5.Application: Window mma, Ime & mpụta akara, mgbasa ozi mgbasa ozi, Ụgbọ ala mgbasa ozi.
6.Suitable niile di iche iche nke ihe mgbaze isi na-ebi akwụkwọ.
Akụkụ nke mpịakọta vinyl na-ejide onwe ya:
1. Ọ dị mfe itinye ink na eserese na-egbuke egbuke
2. Mbipụta dị mma na njikwa na ndị na-ebi akwụkwọ ahọpụtara
3. Magburu onwe arụmọrụ ruru maka n'èzí nkwado eserese
4. Mfe ịkpụ na ngwa n'ụdị dị iche iche nke mkpụrụ
Ihe nkiri na-acha ọcha nke kalenda, ọrụ na-eguzogide ihu igwe dị mma, nrapado na-ahụ maka nrụgide, ezigbo ọrụ lamination ụgbọ elu, agba absorption ink na-egbuke egbuke, nkọwa zuru oke, ihu igwe dị mma, adịghị adapụ, ahapụla ihe fọdụrụ gluu, dị mfe mado, dị mfe. iji wepụ, dị mfe ịgbanwe eserese, n'ikwekọ na mbụ agba chọrọ nke printing.The ahụ mado na-eji mado na mgbidi, iko, KT osisi na ndị ọzọ inkjet eserese, ezi viscosity, mgbochi ultraviolet.The Ọdịdị mejupụtara atọ. akụkụ: PVC arụ ọrụ oyi akwa, nrapado oyi akwa na isi akwụkwọ.
Ngwa: mgbasa ozi anụ ahụ, mgbasa ozi mbipụta ihuenyo, mbipụta foto dị elu, bọọdụ mgbasa ozi, ọdụ ụgbọ mmiri, mgbidi enyo enyo, ịchọ mma ụgbọ ala, mgbasa ozi ọdụ ụgbọ oloko, ihe ịrịba ama na-adịgide adịgide n'èzí, iko, mgbasa ozi camber na-adịghị mma; Mgbasa ozi mgbasa ozi, ụlọ na mkpuchi mkpuchi elu ụgbọ ala, ya mere ewepụghị ire ihe, etc.It nwere àgwà nke ìhè arọ na ogologo ọrụ ndụ.Ọ na-eji ihe mgbaze ma ọ bụ ihe mgbaze na-adịghị ike iji mepụta ụkpụrụ ahaziri iche.
Nke gara aga: Super White PVC VINIL -80100
Osote: SUPER GLOSSY ime ime PVC VINYL-ewepu
Vinyl nrapado onwe ya ụgbọ ala
Vinyl nrapado nke ala
Vinyl nrapado dị elu
Vinyl nrapado onwe onye opaque
Vinyl nrapado onwe
Ihe nkiri PVC White Polymeric
Ihe nkiri mkpuchi ụgbọ ala tint vinyl mara mma ihe nkiri...
Ọdịmma dị elu na-egbuke egbuke na Matte 122X5000M Self Ad ...
Ejiji Nchekwa Ebipụtara Floor Mbipụta Inkj...